Isla Margarita, amara na nsogbu | Akụkọ Njem
Isla Margarita, amara na nsogbu
Mariela Carril | | Islands, Venezuela
El Caribbean Ọ bụ otu n'ime ebe kachasị mma njem nlegharị anya n'ụwa mgbe ọ na-abịa anyanwụ, oké osimiri, okpomọkụ, ụsọ osimiri nrọ na njem ịhụnanya. N'ebe a, e nwere ọtụtụ agwaetiti nwere ike ịga na otu n'ime ha, na otu n'ime ndị kasị ewu ewu, bụ Agwaetiti Margarita.
Agwaetiti a bụ nke Venezuela na aha ahụ na-ezo aka na ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke akụ na ụba nke, na-emebi mba ahụ, anaghị akwụsị inwe mmetụta na Pearl a nke Caribbean. Ma ọ dịghị ihe furu efu na agwaetiti ahụ ka mara mma dịka ọ dịbu. Ka anyị chọpụta.
1 Agwaetiti Margarita
2 Ihe ị ga-eme na Isla Margarita
Bụ n’ebe ndịda ọwụwa anyanwụ nke Oké Osimiri Caribbean na agwaetiti abụọ ọzọ ha bụ naanị agwaetiti nke Venezuela nwere, Nueva Esparta. Columbus mere agwaetiti ahụ ka ọ bụrụ La Asunción, ebe ọ bụ na a hụrụ ya n'August 15, nke bụ ụbọchị Mbata nke Meri. Otu afọ mgbe e mesịrị, aha ya bụ Margarita. N'ihi gịnị?
Nke ahụ bụ aha ahụ na-enweta site na Greek ndi margarites nke putara na a choro pealu na otutu pealu n’ebe a n’oge ahu. Ma ọ bụ otú ha na-ekwu. Ma olee otu ndị nwe si akpọ ya? nche anwụọtụtụ azụ ma ọ bụ ndị njem ụgbọ mmiri. Ezi mara.
Isla Margarita bu otu n’ime agwaetiti ato nke Venezuela nwere n’ime Caribbean: nwere elu 1070 kilomita kilomita nke elu ọ gafere ugwu abụọ ugwu jikọtara ya na ala mgbada, ụyọkọ mmiri na-acha odo odo nke dịpụrụ adịpụ n'oké osimiri na eriri dị ọcha nke ụsọ osimiri. Otu a na-akpọ massif Paraguachoa na nke ọzọ Macanao Peninsula. Ọnụ ọgụgụ kasị elu n'àgwàetiti ahụ dị ebe a ma tụọ mita 760.
Ihu igwe na-ekpo ala na otutu, otutu anwu (echefula onye nchebe), na a nkezi okpomọkụ nke 27ºC. Opekempe ihe adaghị na 22 ºC, yabụ enwere ike inye okpomọkụ n’afọ niile. E nwere oge udu mmiri site na Nọvemba rue Febụwarị, ọ bụ ezie na ha pere mpe.
Ọtụtụ ndị mba ọzọ si Europe na ndị America ọzọ bi na Isla Margarita. Isi obodo nke agwaetiti ahụ bụ La Asunción mana nnukwu obodo bu Lamlọ mmiri, Nke a bụ ebe ọtụtụ n'ime ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nde mmadụ bi n'àgwàetiti ahụ ma, n'ụzọ doro anya, ha dịgasị iche dị ka oge ahụ.
Kedu agwaetiti bi na ya? Ọfọn, njem, nke kpaliri mpaghara akụ na ụba ndị ọzọ dịka iwu, gastronomy ma ọ bụ ụwa nke ntụrụndụ. Ihe bụ ihe ọzọ, Ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri na-anaghị akwụ ụgwọ.
Ihe ị ga-eme na Isla Margarita
N'ebe a, ọ bụ maka ịnụ ụtọ okike: anyanwụ, oké osimiri, osimiri. O nwere ọtụtụ osimiri dị ogologo, mgbe ụfọdụ 300 ruo 900 mita ogologo, ọha niile, nke dị na mpaghara anọ: North Coast, South Coast, East Coast na West Coast. Kedu osimiri ndị kachasị mma?
Ndị ọkachamara na-ekwu Puerto Viejo, Bella Vista, El Agua, La Restinga, Moreno, El Yaque, Parguito, Caribe, Manzanillo, Punta Arenas na Salinas. O doro anya na ndị a bụ ụsọ osimiri dị ọcha na mmiri kristal doro anya. Na mgbakwunye, enwere Agwaetiti Coche ebee ka osimiri Punta Blanca na Amor dị.
Punta Arenas ọ bụ osimiri kachasị amasị ọtụtụ ndị njem nleta. Ọ dị na njedebe nke Macanao, otu awa si n'obodo PorlamarDị ka o kwesịrị, jikọta njem ahụ na nleta Museumlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Mmiri. Ọnụ ọnụ ụsọ osimiri bụ akụkụ dị na ndịda ọdịda anyanwụ nke Isla Margarita na aja dị n'akụkụ abụọ. N’akụkụ ndịda enwere obere obodo ịkụ azụ na akụrụngwa maka ndị njem nleta na n’akụkụ nke ọzọ ọ dị jụụ kamakwa ọ dị oke ọnụ iri.
Ihe kachasị mma ebe a bụ ịnọ ruo mgbe anyanwụ dara n'ihi na anwụ na-ada n'oké osimiri na agba ndị na-eteta n'ụra mara mma. Na Osimiri El Agua Ọ bụ ama ama nke nwere kilomita anọ n'ogologo na 30 n'obosara, ájá ọlaedo na nkwụ. E nwere ọmarịcha boulevard na-agba ọsọ maka kilomita atọ na ọtụtụ ụlọ oriri na ọ eatụ toụ na-eri na-ele oké osimiri anya. Na Osimiri El YaqueN'aka nke ọzọ, ọ dị na ndịda agwaetiti ahụ ihe dị ka kilomita atọ site n'ọdụ ụgbọ elu, ọ nwere oke osimiri na ikuku na-adịghị agbanwe agbanwe na-eme ya zuru oke maka ikuku ikuku.
Gburugburu ebe a nwekwara ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, họtel na ebe obibi, yana sọọfụ na ụlọ akwụkwọ ikuku. Ogologo osimiri bụ Parguito, otu puku mita na ogologo na 20 obosarama ọ bụ, n’ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke agwaetiti ahụ. Site na profaịlụ nke oke osimiri, ọ dị mma maka egwuregwu na-achọ ebili mmiri na ifufe. Ọ bụ osimiri dị ndụ na afọ niile n'agbanyeghị na ọ bụghị ewu ewu dị ka El Agua.
Ndị a bụ ụfọdụ n'ụsọ mmiri ndị dị na Isla Margarita, mana o doro anya na ọ bụghị naanị ha. Ka o sina dị, ọ bụrụ na ndụ n'okpuru anyanwụ na-emeju oge ezumike gị ma ọ masịrị gị Mee ihe ndi ozo mgbe ahụ ị nwere ike ime ndepụta:
Bụ Ndị Restinga nke bụ akwa mmiri jikọtara akụkụ abụọ nke agwaetiti ahụ na bụ a National Park. Ọ bụ naanị 10 nkeji si Punta Piedras ụgbọ mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri, ọkara otu awa site na Porlamar na a n'ihu 15 nkeji ije site na ọdụ ụgbọ elu.
Ozugbo a kwụrụ ụgwọ ọnụ ụzọ ogige ahụ, e nwere ụgbọ mmiri ndị na-akpọrọ ndị ọbịa site na mangroves na ọwa mmiri, ma emesịa, ee, mmadụ nwere ike ịnụ ụtọ ya osimiri nke dị kilomita 22 n’ogologo, aja na-enweghị ntụ na ebili mmiri. Nọrọ ụbọchị ahụ, ọ bụrụ na ịchọrọ.
Obodo nke Porlamar bu nke kachanụ n’àgwàetiti ahụ na o nwere ya na-adọrọ mmasị, karịsịa ma ọ bụrụ na-amasị gị ịzụ ahịa. Banyere ya Boulevard Guevara enwere ọtụtụ ụlọ ahịa na otu ihe ahụ na ụzọ Santiago Mariño na 4 de Mayo. N’akụkụ nke ọzọ nke obodo, chee ihu pampatar, e nweela ọtụtụ uto na ọ bụ ebe taa bụ ụlọ ahịa Sambil, La Redoma na Rattan Plaza, ha niile na-ewu ewu.
Olee otú bụ free mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri ọnụahịa ndị a na-apụghị imeri emeri, na-enweghị ụtụ isi. Enwekwara ezigbo ọnụahịa na ahịa obodo nke Conejeros, nke bụbu ahịa dị mfe mana taa bụ ebe ama ama nke jisiri ike mee ka ọnụahịa dị ala.
La Asunción bụ isi obodo agwaetiti ahụ ma bụrụkwa onye njem. Ebe i nwere ike ịga na Castle Santa Rosa de la Eminencia, site na narị afọ nke 9, wuru mgbe French wakporo ma mepee ndị ọbịa site na Monday ruo Sunday site na 6 ruo XNUMX elekere. Ndị ọzọ na-akpali ebe pụrụ ịchọta gburugburu nke Ogige Bolivar: Katidral nke Nwanyị Nwanyị nke Assumption, dịkwa site na narị afọ nke XNUMX, dịka ọmụmaatụ.
Na Juan Griego Bay, n'obodo nke otu aha, bu Fort La Galera, ihe na-esote, dị mma ịtụgharị uche maka ọdịda anyanwụ, ma ọ bụ Untalọ ọkụ Punta Ballena, ọ bụghị ebe dị anya ma nweere onwe ịbanye. Tinye ụka, ndị Ogige Ugwu Cerro El Copey, na mara mma chọpụtara oche na ọtụtụ ụzọ ụkwụ, na Mmiri Museum na ihe ọ bụla ọzọ agwaetiti ahụ na-enye na ị ga-etinye ya na ndepụta gị nke ebe ndị Caribbean.
Ma gịnị na - eme taa na Isla Margarita? Ọfọn nsogbu akụ na ụba agbaala ya na mbata nke ndị Venezuelans ezumike ezumike belatara nke ukwuu, ikuku ikuku agbadatalakwa, ya mere na nkenke, oge ole na ole gara aga abụwo akwa, enwere m olileanya na ihe ga-akawanye mma n'ihi na akụrụngwa ndị njem nleta ka na-eche ka ikuku dị mma ịfụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Venezuela » Isla Margarita, amara na nsogbu
Ihe ị ga-ahụ na mgbago ugwu Portugal
Ihe ị ga-ahụ na mpaghara Alentejo